Mayelana NATHI - Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd.
Imikhiqizo yethu iyatholakala kabanzi ukupakisha ama-Pharmaceuticals, i-Foods, izimonyo, i-Lubricant, i-Pesticides, njll. Ngemisebenzi ephezulu yokuvimbela ukuvuza nokumanzi, anti-mbumbulu, nokwelula isikhathi sokugcina imikhiqizo.
Inkampani yethu itholakala ku-601, eLaolu Road, ePudong New District, eShanghai. Isitshalo sethu siseduze neYangshan Port nePudong International Airport. Ukuhamba kwethu kulula kakhulu.
Sizoqhubeka nokugcizelela emisha, futhi senze ibhizinisi nezinkampani ekhaya nakwamanye amazwe ngesisekelo sokulingana nokusizakala ngokuhlanganyela, sizinikele ekunikezeni imikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.
Inkampani yethu ineminyaka engaphezu kwengu-10 isipiliyoni kubuchwepheshe bokukhiqiza. Ngocwaningo lobuchwepheshe lobuchwepheshe nentuthuko, futhi ngokuqhubekayo sithuthukisa futhi sithuthukise imikhiqizo, izinga lethu lobuchwepheshe futhi njalo embonini efanayo basesikhundleni esiphambili.
Ukuphathwa kwenkampani yethu i-GMP kumisiwe, sesimise isikhungo sokukhiqiza nokulawulwa kwekhwalithi, (ukulawulwa kwekhwalithi yobungcweti, ukuhlolwa kwekhwalithi nokuhlolwa), inkampani inendawo ebonakalayo neyamakhemikhali, kanye nokuthwetshulwa kweLebhu (10,000) Yezinto zokusetshenziswa , ukuhlolwa komkhiqizo nokuhlolwa.
Yaqalwa ngonyaka we-1990, ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi yemizamo, inkampani yethu isivele inesiko layo elihlukile lenkampani. Ngo-2006, senza ushintsho olunzulu sibe isitshalo esifana nengadi, indawo eluhlaza manje ingamaphesenti angama-50.
Ikilabhu elihlinzekwa yinkampani nabasebenzi, igumbi lokufundela, nabanye abasebenzi, abaya ekuphumuleni, ezokungcebeleka, bekhulisa ulwazi ngezindawo, abasebenzi bahlinzekelwe amakilabhu e-karaoke igumbi lokulalelwayo nelokubukwayo, igumbi le-ping-pong, igumbi le-chess ne-dominoes. Ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yabasebenzi kuthuthukise ukuhlangana kwabo, inkampani ihlela ukuqeqeshwa okujwayelekile kobuchwepheshe, ulwazi lobuchwepheshe, imincintiswano yamakhono neminye imisebenzi, abasebenzi benkampani ephephandabeni labo lamasonto onke ukuthi izitayela zakamuva embonini futhi bashicilele owabo umsebenzi, futhi njalonjalo.
Ibhizinisi likhule ngentuthuko eqhubekayo yamasiko ezinkampani, sithembele emizamweni yethu efanayo nokuxhaswa kwakho, ukupakisha iShanghai Purple Link Limited kuzoba ngcono nakakhulu!